Knowledge – Page3– Nyi Ma Lay
သင့် ရဲ့ ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည် IQ ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းလေး (၅) ခု
By Nyi Ma LayPosted on April 26, 2021
လူ တချို့က IQ (intelligence quotient) ကို ပြုပြင်လို့ မရနိုင်ဘူး လို့ အမှတ်မှားနေ တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ IQ ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးကို တိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ လုပ်လို့ရတဲ့ […]
ဒီလိုအမူအကျင့်လေးတွေ လုပ်မိရင် တစ်လကနေ ၃ လအထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်
ဒီဟာတွေ လုပ်မိရင် တစ်လ ကနေ ၃ လ အထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေ တတ်ပါတယ် (၁) အိပ်ယာနောက်ကျမှထခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့ (၂) မနက်ပိုင်းကို ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ (၃) အိပ်ယာထထချင်း မျက်နှာအရင်တန်းသစ်ပါ […]
ပနားမား တူးမြောင်းရဲ့ မိုင်အနည်းငယ် အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ El Valle de Anton ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးနားက တောအုပ်တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အဲဒီနေရာက သစ်ပင် အတော်များများရဲ့ ပင်စည်တွေဟာ သာမန်အ […]
မှတ်ထား တာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက် အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ ရှေးဟောင်းနယ်မြေတစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား….. မုံရွာတစ်ဘက်ကမ်းဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ယင်းမာပင်ခရိုင် ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ဖိုးဝင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကျော်ပြီးမှ ရောက်တဲ့နေရာလေးတော်တော် သွားရတယ်။ကျော က်သားတွေလည်း ဘေးဘက် မှာများတယ်။ဘာနည်းပညာ အကူအညီမှ မပါပဲ ကျောက်တောင်ကြီး တစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့သာထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ ” ရွှေဘတောင် […]
By Nyi Ma LayPosted on April 22, 2021
1. နိုင်ငံခြားသွားပါ ဒေါသကို စီမံခန့်ခွဲတတ်လာမယ်, 2. မိတ်ဆွေနဲ့ ရန်သူကို ခွဲခြားတတ်လာမယ်, 3. ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေကို တွယ်တာတတ်လာမယ်, 4. ပညာရဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုသိလာမယျ, 5. ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်တစ်ပါးလို့ သဘောပေါက်လာမယ်, 6. […]
ကိုယ်မြင်နေရတာက ဘာမှန်းမသိလို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူမေးများခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ
By Nyi Ma LayPosted on April 22, 2021 April 22, 2021
ကမ္ဘာကြီးေ ပါ်မှာ ထူးဆ န်းပေ့ဆိုတဲ့ အရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှ အဓိပ္ပါယ်ေ ဖာ်မရတဲ့ အရာတွေလ ည်း ရှိသလို တချို့ကတော့ နားလ ည်သူတွေရဲ့ ရှင်းပြချက်အရ သဘောပေါက် လွယ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုဖော်ပြေ ပးမယ့် […]
တည်ရှိနေမှန်းတောင် မသိကြရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အသေးဆုံး နိုင်ငံလေးတွေ
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ် မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ ကြားတောင် မကြားဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ လည်း ပါမှာပါပဲ။ တချို့နိုင်ငံတွေဆို သေးလွန်းလို့ ရွာလေး တစ်ရွာစာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး […]
အသက် ရှည်ရှည်နေချင်ရင် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သင့် တဲ့ အလေ့အကျင့်များ
” အသက်ေ လးရယ် ရှည်စေလို မန်းတော င်ရိပ်ကိုခို ” ဆိုပေမယ့် အသက်ရှည်ေ စနိုင်မယ့် အခြားနည်း လမ်းတွေလည်းရှိေ နပါသေးတယ် ။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အသက် ၉၅ နှစ်အထိ အသက်ရှည်နေထို […]
ကွန်ဂို ဒီမိုကရက် တစ်သမ ္မတနိုင်ငံမှာ ရိုက်ကူး ထားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုများဟာ မကြာသေး ခင်ကဘဲ online ပေါ်ရှိ လူအများရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိသွား ခဲ့ပါတ ယ်။ ၎င်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာ လူအများ အပြားက တောင်ပေါ်သို့ […]
ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြန်ပွင့်လာပီဆိုတော့ VPN နဲ့ပက်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ သိထားရမည့် အရေးကြီးသည့်အရာများ
သူမသွားလေရာ နေရာတိုင်းကို များစွာသော ခွေးတွေ ၊ ကြောင်တွေ ၊ ငှက်တွေ တစ်ကောက်ကောက် လိုက်နေတာ ခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီး
ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတဲ့ စာတစ်လုံး ဘုရားတစ်ဆူ ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သိလား….